Nin u dhashay dalka Ivory Coast ayaa abuuraya Yswara, oo ah sumcadda shaaha qaaliga ah ee Afrikaanka ah ee 100% - Afrikhepri Fondation
Jimco, Sebtember 17, 2021
Dumarka Ivorian waxay abuurtaa Yswara, oo ah nooc tayo sare leh oo ah 100% shaaha Africa
Swaady Martin-Leke, agaasimihii hore ee General Electric koonfurta Sahara, ayaa bilaabaya sumadeeda shaaha, Yswara. Dukaankii ugu horreeyay wuxuu ka furaa Ogosto 6 magaalada Johannesburg. Markuu jiray 35 sano oo keliya, Swaady Martin-Leke ma uusan hareer marin. Markii uu ku soo biiray General Electric isagoo ah hanti-dhowre 2001-dii, Franco-Ivorian-ka wuxuu noqday agaasime waaxeedka ka hooseeya saxaaraha Afrika sanadkii 2009, isagoo ka shaqeynayay Paris iyo Nairobi, ka hor inta uusan dago Johannesburg. Intii uu hoggaaminayey, dakhliga Afrikaanka weyn ee Mareykanka wuxuu ka kordhay 20 milyan illaa 300 milyan oo doolar (qiyaastii 250 milyan oo euro) sanadkii.
“Waxaan ku dhashay Côte d'Ivoire, waxaan ku soo barbaaray halkaas iyo Liberia ka hor intaanan u qaxin. Laakiin marwalba waxaan jeclaa inaan soo laabto si aan u abuuro shirkad muujineysa aqoonta maxalliga ah, ”ayey tiri mid ka mid ah kuwa ku dhex istaagay General Electric u doodisteeda suuqyada ka hooseeya Saxaraha iyo maaraynta Afrika iyo haweenka Wadamada badan.
“Fikradda ah in aan ka qaybqaato soo saaridda iyo qaybinta bacaha shaaha ayaa yimid intii aan ku jiray MBA-da. Waxaan baranayey sida astaamaha waaweyn ee faransiiska ah ee loo yaqaan 'Louis Vuitton' ay u yaqaaneen sida loo ilaaliyo loona warshadeeyo wax soo saarkooda dhaqanka. Waxaan bilaabay inaan raadsado meel gaar ah oo ay macquul tahay in lagu sii hayo qiimaha dheeriga ah ee Afrika.
Aad u jecel shaaha, waxaan si dabiici ah uga fikiray koonkan, ayay sharraxday. "Waxaan bartay istiraatiijiyadda kooxaha sida shirkadda Faransiiska ee Mariage Frères, oo ku takhasustay noocyo ka mid ah waxa loogu yeero shaah gourmet, oo ka maqnaa dukaamada qaaradda, waxaana ku arkay qayb sii kordheysa", ayay sii wadaysaa, iyadoo ku qanacsan kororka tirada Macaamiisha Afrikaanka ah ee hodanka ah ayaa soo jiitay badeecadan qaaliga ah, ee maxalliga ah iyo tan aadka u sarreeya (60% qiimaha halkii kiish).
Ka dib markii uu helay soosaarayaal tayo leh oo u dhashay Rwanda iyo Malawi, aasaasihii Yswara wuxuu Koonfur Afrika ka helay lamaane ku guuleysta xagga warshadaha. Shan sano gudahood, waxay rajeyneysaa inay ku guuleysato sanadle ah 4 milyan ilaa 6,5 milyan oo euro.
Tilmaamaha Yswara ma aha oo kaliya muuqaalkiisa raaxada. Marka laga soo tago xaqiiqda ah in dhammaan walxaha shaabadeysan ee Yswara ay yihiin 100% Afrikan, waxay sidoo kale u matalaan magacyadooda dhawr gobol oo kala duwan iyo sheekooyinka. Sidaas awgeed ururinta shaaha kala duwan waxay la socdaan qaybaha kala duwan ee dhaqanka iyo taariikhda.
Tusaale ahaan, ururinta "Boqortooyada Afrika" waxay sharraxaysaa boqortooyooyinka maxaliga ah ee muddada gogoldhigga. Ururinta "Boqorada Afrika" (boqorada Afrika) waxay la wadaagtaa boqorad Afrikaan ah nooc kasta oo shaah ah. Waa nuxurka Afrika ee lagu faafiyey alaabada Yswara. Shumacyadeeda ayaa mid walba waxaa ku yaal magaca caasimadaha Afrika, sidaa darteed laga bilaabo Dakar ilaa Nairobi oo loo sii maro Harare, Swaady waxay rajeyneysaa inay macaamiisheeda ku quusin doonto bartamaha Afrika waqtiga shaaha maxaa yeelay "Shumac kasta oo ur ah sida magaalada Afrika".
Yaa Asantewa, Boqoradda Hooyo ee Boqortooyada Asante
Aminatou de Zaria, Boqorka Haoussa boqoradda
Qelasy, waa kaniiniga waxbarasho ee laga sameeyay Ivory Coast